I-China Monoblock yoLawulo lweVenive SD5 Imveliso kunye neFektha | Junbao
Ivelu yokulawulwa kweMonoblock
Ixabiso lokulawula Icandelo
Icandelo lamandla e-Hydraulic
Ivelu yoLawulo lweMonoblock ZT20
Ivelu yokulawulwa kweMonoblock P80
Ivelu yokulawulwa kweMonoblock DCV40
Ivelu yokulawulwa kweMonoblock P40
I-SD5 yokulawula iMonoblock
Umsebenzi olula, ohlanganisiweyo kunye noxanduva olusindayo uyile iivalves ze-monoblock ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yamacandelo e-hydraulic and open system evaliweyo. Ijongwe ngovimba wokuphelisa uxinzelelo kunye nevali yokujonga umthwalo. ◆ Ifumaneka ngokufana, uthotho okanye isetyhula ye-tandem. ◆ Amandla okukhetha ngaphaya kwezibuko (kuphela ngakwicala elifanayo okanye lesekethe). ◆ Ububanzi be-16 mm - 0,63 kwii-spools eziguqukayo. ◆ Iintlobo ngeentlobo zeenkonzo zokuvula i-port. ◆ Ukwenza isenzo yinto yencwadana yemiyalezo, inyibilika, yinyibilikhi, inyibilikhi, ...
Ixabiso leFOB: I-US $ 0.5 - 9,999 / isiqwenga
Ubungakanani beMin.Order: I-100 Piece / iziqwenga
Ukubanakho ukuBonelela: I-10000 Piece / Piece ngenyanga
Thumela i-imeyile kuthiKhuphela njengePDF
Umsebenzi olula, ohlanganisiweyo kunye noxanduva olusindayo uyile iivalves ze-monoblock ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yamacandelo e-hydraulic and open system evaliweyo.
◆Ifakwe ngevalve yokuphumla yoxinzelelo kunye nevali yokujonga umthwalo.
◆Ifumaneka ngokuhambelana, uthotho okanye isetyhula ye-tandem.
◆Amandla okukhetha ngaphaya kwezibuko (kuphela kumjikelezo ofanayo okanye we-tandem).
◆Ububanzi be-16 mm - 0,63 kwii-spools eziguqukayo.
◆Iintlobo ngeentlobo zeenkonzo zokuhamba ngevoti.
◆I-Actuation yimanyuwali, i-pneumatic, i-electro-pneumatic, hydraulic, electro-hydraulic, ene-solenoid kwaye ikude Ngeentambo eziguquliweyo zolawulo lweentambo.
I-SD5 Series Monoblock Directional Directional Valve
Amachweba A kunye no-B
I-M18xl, 5, M22xl.5
Idatha yeModeli Sd5 Dimensional
Edlulileyo: Ivelu yokulawulwa kweMonoblock P80
Okulandelayo: Ivelu yokulawulwa kweMonoblock SD11
Ivelu yokulawulwa kweMonoblock SD11
Ivelu yeUlawulo lweMonoblock
Ivelu yoLawulo lweMonoblock 5200
Ivelu yoLawulo lweMonoblock ZD102
Mva nje Iindaba
IBauma CHINA 24. - 27. Novemba 202 ...
IArhente yoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe yoMatshini woKwakha, oomatshini beMpahla yokwakha, oomatshini bezemigodi kunye nezithuthi zokwakha. Owona msitho mkhulu kwaye ubaluleke kakhulu kwimizi-mveliso eAsia bauma CHINA luluntu lwase-As ...
Iminyhadala yemveliso yonyaka e-Asia-Pacific Region ye-PTC ASIA 2019, iCeMAT ASIA 2019 kunye neComVac ASIA 2019- ziyaqala namhlanje kwiziko laseShanghai eNtshona. Iminyhadala yeentsuku ezine iya kuhambelana ne-E -...